Tiradda Guud ee ay Galafteen Weerarada AlShabaab Ay Ku Qaadey AMISOM
By WARIYAHA CAALAMKA On Sep 12, 2019
Warbixin dhowaan la daabacay ayaa waxaa lagu shaaciyey tiradda askarta AMISOM ee lagu dilay weeradda ka yimaada AlShabaab.
Bare sare Paul Williams oo wax ka dhiga. Jaamacad ku taalla Mareykanka. Ayaa warbixin ka diyaariyay khasaaraha Ciidamada AMISOM ka soo gaaray Soomaaliya tan iyo markii uu howlgalka billowday.
Xoogaga Midowga Afrika oo dalka soo galay sanadkii 2007-dii ayaa waxay ka kala socdaan dalalka; Uganda, Burundi, Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya.
Askarta oo isugu jira milatari iyo boolis. Ayaa waxaa waajibaadkooda uu yahay nabad-illaalin iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda xiriirka la leh ururka Al-Qaacida.
Gobolada qaar ee wadanka ayey ka howlgalaan. Waxaana ay la kulmaan weeraro xoogan oo isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah.
Qormadda cusub oo lagu soo xigtay illaa iyo shan illo wareed. Ayaa lagu xusay in khasaaraha soo gaarey intii u dhaxeysay March 2007 iyo December 2018.
Tiradda dhimashadda oo aanan loo kala qaad-qaadin dalalka ayaa waxaa lagu sheegay in ay gaareyso ku dhowaad laba kun oo askar ah.
“Dhimashada AMISOM tan iyo markii ay Soomaaliya galeen ayaa waxaa lagu qiyaasayaa 1,483 iyo 1,884,” ayuu yiri Prof Williams oo warbixinta qoray.
August 2009 ilaa September 2012,waaxaa geeriyootay 439 Askari. Waxaana lagu ogaaday dukumiintigii magtooda lagu bixiyay oo muujinaya in askarigiiba laga bixiyay $50,000 oo doollarka Mareykanka ah.
Isla qeybtaas waxaa dhaawac ahaan ku jira 575 Askari kuwaas oo midkiiba la siiyay $10,000 oo doollarka Mareykanka ah.
Warbixin uu soo saaray Midowga Afrika islamarkaana u dhaxeysa 2014 ilaa 2018. Ayaa waxaa ay muujineysaa magdhowga la siiyay Ciidamada AMISOM ee xilligaas dhintay ama dhaawacmay. Waxaana lacagta ay gaareysaa $74.6 Milyan oo doollarka Mareykanka ah. 79% lacagtaas waxaa ay ku baxday magdhowga kuwa dhintay halka 21% ku baxday kuwa dhaawacmay.
Xarunta Midowga Afrika ee Adis ababa darbigeeda. Waxaa suran Askarta Midowga Afrika uga dhimatay howlgallada Burundi. Jamhuuriyadda Afrikada dhexe. Sudan iyo Somalia.
Bishii August ee sanadkan 2019 oo kali ah waxaa darbigaas lagu daray liiska 1108 Askari kuwaas oo ay waxyeello ka soo gaartay dalalka sare ku xusan.
Sidoo kale Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxaa uu xaruntiisa xalane ku leeyahay darbi lagu maamuuso Askarta AMISOM iyo kuwa Soomaaliya.
Darbigaas kuma xusna magacyada iyo darajada Ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ee ku dhintay gudaha dalka hayeeshee waxaa kaliya ku qoran. ” Xusuusta Saraakiisha Ragga iyo Dumarka leh ee Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo Askarta Xoogga dalka Soomaaliya ee noloshooda ku waayay ay nabad iyo xasilooni ugu soo celiyaan Soomaaliya”.
Dhinaca kale. Ma jiro wax war ah oo ku saabsan tirakoobkan oo illaa iyo haatan laga hayo dhanka howlgalka nabad-illaalinta ee AMISOM oo diidey in ay ka hadlaan.